Izixhobo ezi-5 zokujonga ukuthembeka kweeCD okanye iiDVD | Iindaba zeGajethi
Ngaphandle kwento yokuba namhlanje inani elikhulu labantu liqhelekile gcina ulwazi olubalulekileyo efini kwaye nakweyiphi na inkonzo oyibhalisileyo kule ndawo, kusekho elinye inani labantu abathi bagcina ulwazi olubalulekileyo kwiiCD-ROM okanye kwiiDVD. Ukuba khange ukwazi ukuphonononga ulwazi kwezi disc ixesha elide, kungafuneka wenze njalo ngoku njengoko bekwimeko ekufutshane kakhulu nokonakala.
Ngexesha elithile elidlulileyo bekukhankanywa kwiindaba ezahlukeneyo kwiwebhu, ukuba ibhetri yayinakho ukuqala kwayo ukonakalisa okanye ukonakalisa ezi CD-ROM okanye ii-DVDs, ngenxa yokuba abasebenzisi bazo babezigcine kwiindawo ezingafanelekanga. Ukuze ulahle amathandabuzo, apha ngezantsi siza kuthetha ngezixhobo ezimbalwa zeWindows ezinokukunceda wazi ukuba iidiski ziyafundeka okanye hayi.
1 Kuthekani ukuba ndifumana i-CD-ROM okanye ii-DVD ezingafundekiyo?
2 Umhloli weVSO
3 ICDReader 3.0
4 Idisk Disk Khangela
6 UNero DiskSpeed
Kuthekani ukuba ndifumana i-CD-ROM okanye ii-DVD ezingafundekiyo?
Izixhobo esiza kuthetha ngazo kamva ziya kukunceda wazi ukuba ezi yunithi zokugcina zikwimeko elungileyo; Ukuba le yimeko, inokuba licebo elilungileyo, ukuba uqale yenza ugcino Ulwazi lwakho kwi-hard drive yangaphandle okanye kuyo nayiphi na indawo yokugcina efini; Ngoku, ukuba ezinye zeediski zikwimeko embi kwaye kuhlalutyo ungabona iibhloko ezimbi, ungasebenzisa nayiphi na enye indlela esele siyikhankanyile kwinqaku elidlulileyo, eliza kukunceda ukufumana uninzi lolwazi Ingasahlangulwa kwakhona kuloo miqhubi.
Indawo yokuqala ukukhankanya inegama «Umhloli weVSO«, Esimahla simahla kwaye ikunika isixa esikhulu solwazi malunga neCD-ROM okanye idiski yeDVD oyifakileyo kwitreyi yekhompyuter yakho.
Iithebhu ezimbini zokuqala zalesi sicelo ziya kukwazisa ngohlobo lwediski kunye nezixhobo zekhompyutha eziyifundayo. Ibhokisi yesithathu (Skena) yile qalisa ukuthatha iimvavanyo zokufunda nokubhala ukwazi ipesenti yokuthembeka ukuba ikunika le CD-ROM disc.
Esi sixhobo sithi «ICDReader 3.0»Kukhululekile kwaye kuza ujongano olufana kakhulu nento onokuyibona ngeWindows Explorer.
Oku kuthetha ukuba kufuneka ukhethe idiski kwicala lasekhohlo kwaye ucinezele iqhosha elithi "Funda" ukuqala uhlalutyo ngalo mzuzu.
Idisk Disk Khangela
Ngonxibelelwano olunomtsalane ngakumbi kunezinye iindlela zangaphambili, «Idisk Disk Khangela»Ngaba kuya kukunceda ukhethe idrive ofuna ukuyihlalutya kwaye ufumane ulwazi olongezelelweyo kwiwebhusayithi yonjiniyela.
Isixhobo simahla, nangona xa uqala inkqubo yohlalutyo uya kuthunyelwa kwiwebhusayithi yonjiniyela ukufumana ikhowudi yomsebenzisi; kwangaxeshanye kuya kufuneka ukope kwaye uncamathisele kwindawo efanelekileyo yesixhobo kwaye uyisebenzise ukuba ufuna kangangoko ufuna.
Esi sixhobo sibizwa ngokuba "yi-dvdisaster" sizakuzama ukuhlalutya imeko yediski yakho, siqhubeke mva kuye buyisa ulwazi kuyo kangangoko kunokwenzeka.
Le yeyona ndlela ifanelekileyo yokusebenzisa, kuba ukubuyisa ulwazi kusetyenziswa iikhowudi zokulungisa iimpazamo eziququzelela ukukhutshwa kolwazi, into enokufumaneka kwifayile yeRar ecinezelweyo.
Ngokungafaniyo nezinye iindlela esele sizichazile ngaphambili, «UNero DiskSpeed»Inikwe ujongano apho umsebenzisi anokubona ngokucacileyo ukuba ngawaphi amacandelo afanelekileyo kwaye akwimeko embi.
Ngaphakathi kokunxibelelana kwayo unokuchaza isantya ofuna uhlalutyo ngaso; iziphumo ezingcono onokuzifumana ngesantya esisezantsi Ngale ndlela, uhlalutyo luya kwenziwa yi-byte.
Ngaphambi kokwenza uhlalutyo ngayo nayiphi na enye indlela esele siyikhankanyile apha ngasentla, kufuneka uqiniseke ukuba i-CD-ROM okanye i-DVD disc icoceke ebusweni apho kufundwa khona, okuhlala kuluhlaza okanye kuluhlaza okwesibhakabhaka. Kukho amaxesha apho banako ukufumana iminwe ibhalisiwe Kummandla ochaziweyo, ngenxa yoko ukungafikeleleki kulwazi njengoko oku kubonisiwe njengempazamo yediski. Ukuba uyicoca ngelaphu lesilika (kwezo zisetyenziselwa ukucoca iilensi zeglasi) uyakube ususa ithuba elinokubakho lesiphoso esinokubakho ngezi zixhobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Izixhobo ezi-5 zokujonga ukuthembeka kweeCD zakho okanye iiDVD kwiiWindows
Ukugqwesa, bendijonge iinkqubo eziza kujonga imeko yeeCD kunye neeDVD. Kwaye kwakungekho lwazi lukhulu kwiwebhu.
Uyifaka njani i-MS Office Serial No. ngokuzenzekelayo xa ifakiwe